Aktarad ku tilmaantay shirkadda Bollywood-ka “jiko dad gaar ah u shidan”. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Aktarad ku tilmaantay shirkadda Bollywood-ka “jiko dad gaar ah u shidan”.
Aktarad ku tilmaantay shirkadda Bollywood-ka “jiko dad gaar ah u shidan”.
Bollywood, oo ah shirkadda ugu weyn ee filimada dalka Hindiya, waxay ku jirtaa dhibaato.
Dhibaatooyinkaas waxaa bartanka ka taagan Kangana Ranaut – oo ah atariisho 33 jir ah oo u muuqata inay dagaal la galeyso inta badan jilayaasha ay isla shaqeeyaan.
Dhowrkii isbuuc ee lasoo dhaafay, waxay dadka ugu sarreeya shirkaddaas ku eedeysay inay kala xigsadaan jilayaasha iyo inay geystaan xad-gudubyo dhinaca galmada ah. Si adag ayey u dhaleeceysay kuwo badan oo ka mid ah jilayaasha ay ka wada shaqeeyaan bollywood-ka, waxayna qaarkood ku tilmaantay inay daroogada isticmaalaan.
Guud ahaan shirkadda Bollywood-ka ayey ku tilmaantay “jiko dad gaar ah u shidan”.
Ranaut waxay sheegtay in “dhibaato badan loogu geystay shirkaddan, oo xitaa ay halis galiyeen dad isticmaala maandooriye” sidaas darteedna inta ay iyada caqabadaha horyaalla iska leexineyso ay “wadda u furi doonto dad badan oo kale”.
Hase yeeshee dadka iyada lafteeda dhaleeceeya waxay sheegayaan in howsheeda oo dhan ay salka ku heyso dad siyaasiyiin ah oo soo adeegsanaya atariishadan.
Waxaa la isla dhex marayaa warar ku saabsan inay qarka u saaran tahay ku biiritaanka xisbiga talada dalka Hindiya haya ee BJP, jilayaasha ay bartilmaameedka ka dhiganeysana ay yihiin kuwa kasoo horjeeda fikirkeeda siyaasadeed.
Ranaut, oo lagu yaqaanno bandhigyadeeda awoodda badan, waxay ku guuleysatay abaalmarinno faro badan iyo billadda Padma Shri (oo ah abaalmarin ay bixiso dowladda), taasoo lagu siiyay kaalinta ay uga jirto filimada.
Atariishadan oo mar walba ka sheekeysa noloshii adkeyd ee ay soo martay yaraanteeda waxay hadda leedahay magac weyn iyo malaayiin taageerayaal ah oo ku hala sugan Hindiya iyo daafaha caalamka. Waxaa lagu tilmaamaa inay tahay atariishada ugu kalsoonida badan, uguna guulaha badan jilayaasha shirkadda Bollywood-ka.
“Waa qof lagu bartay bandhigyo cajiib ah,” ayey tiri Shailaja Bajpai, oo ah tifaftiraha website-ka “The Print”.
Sannadihii ay howshan kusoo jirtay Ranaut waxaa lagu yaqaannay inay si geesinnimo leh ugu hadasho dadka ay sheegto in laga gardaran yahay, sida ay sheegtay Bajpai.
“Waxay dagaal la gashay dad awood badan ku leh shirkadda filimada Bollywood-ka, sida Karan Johar, oo ay ku eedeysay inuu dadka kala xigsado; waxay sidoo kale meel fagaaro ah isku candhuufeen jilaaga caanka ah ee Hrithik Roshan, horayna ay filin isula soo sameeyeen, ayna ku tilmaanto inuu xiriir jacayl kasoo dhaxeeyay mar laakiin uu qof xun yahay.”
Xiisaddan waxay billaabatay bartamihii bishii June, kaddib geeridii doodda weyn dhalisay ee jilaagii lagu magacaabi jiray Sushant Singh Rajput – kaasoo meydkiisa laga helay gurigiisa. Booliska Mumbai ayaa sheegay in Rajput uu isagu isdilay.
Ranaut waxay durba geerida atoorahaas u sababeysay kala xigsasho ka socota shirkadda Bollywood-ka, iyadoo sheegtay inay jiraan dad ku kallifay inuu isdilo.
Waxay ku tilmaantay inuu ahaa qof shisheeye ka ah Bollywood-ka, sida ay iyada ahayd oo kale, qof u hiilliyana uu ka waayay.
Dhowr isbuuc kaddib Rajput aabihiis ayaa dhiamshada wiilkiisa ku eedeeyay atariishada lagu magacaabo Rhea Chakraborty, taasoo uu sheegay inay lacagtiisa ka qaadatay kuna abuurtay walwal badan.
Chakraborty way beenisay eedeymaha loo soo jeediyay oo dhan. Horaantii bishan ayaa xabsiga loo taxaabay atariishadan kaddib markii la sheegay inay maandooriyeyaal u iibisay Rajput, haddana waxaa ku socda baaritaanno ay wadaan saddex hay’adood oo ka tirsan dowladda.
Chakraborty waxaa bartilmaameed ka dhigtay qaar ka mid ah suxufiyiinta ugu waaweyn dalka Hindiya iyo dadka caanka ka ah baraha bulshada, waxayna xuddun u noqotay hadalheynta ku saabsan geeridii Rajput.
Ranaut iyadu waxay arrimahaas oo dhan dusha uga tuurtay guud ahaan shirkadda Bollywood-ka, waxayna sheegtay inay jiraan dhacdooyin kale oo sidaasoo kale loogu dulmiyay jilayaal soo baxayay.
Iyada lafteeda ayey isku tilmaantay inay dhibbane u soo noqotay dadka awoodda ku dhex leh shirkadda filimada ee ugu weyn Hindiya.
Wareysi ay telefishin siisay iyo barteeda Twitter-kaba waxay ku sheegtay in dadka dhibaatooyinkaas sameeya ay ugu horreyaan agaasime Karan Johar iyo Hrithik Roshan.
Atariishada lagu magacaabo Sonam Kapoor ayey ku tilmaantay inay tahay burcadda bollywood-ka. Sidoo kale Urmila Matondkar ayey aflagaaddeysay. Atariishooyinka kale ee ay weerartay waxaa ka mid ah Swara Bhaskar iyo Richa Chadha.
Markii ugu horreysay ee ay Kangana sheegtay in Bollywood ay ka dhex jirto kala xigsasho waxay ahayd sanadkii 2017-kii, tan iyo xilligaasna waxyaabo badan ayey ku weysay dagaalkaas.
Shirkaddan ayaa ah meel ay kusoo hirtaan dhammaan dadka hal abuurka leh ee Hindiya iyo kuwa daneynaya xirfadda jilitaanka. Warbaahinta Hindiya ayaa sidoo kale kaalin weyn ka ciyaartay horumarka Bollywood, maadaama ay wararkooda iyo barnaamijyadoodaba xoogga ku saaraan madadaalada.
Maalintii Sabtida, Deepika Padukone, oo ka mid ah atariishooyinka mushaarka ugu badan ku qaata Bollywood-ka aya looga yeeray xarunta xakameynta daroogada ee dowladda Hindiya, waxaana ku socda baaritaan ku saabsan in shirkadda dhexdeeda laga isticmaalo maandooriyeyaasha.
Baaritaan kaas la mid ah ayaa ku socda atariishooyinka kale ee kala ah Shraddha Kapoor, Sara Ali Khan iyo Rakul Preet Singh. Dhammaan afartoodaba way beeniyeen eedeymaha loo heysto
Previous articleMadaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo booqday xarumo ganacsi oo ku gubtay dab barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Dhusamareeb
Next articleGudoomiyha gobolka Banaadir oo shacabka muqdisho ku eedeeyay Dayacaad
Guriyo oo ka Xoogay Maxamed Siyaad Bare Ali Hersi Farah (...